Hugawng kachin(Jinghpaw,singpo,jingphosu): ဘာသာရေး အဓိကရုဏ်းဟာ စစ်တပ်နောက်ခံ အစိုးရ အတွက် အမြတ်တွေ အများကြီး ရလိုက်
ဘာသာရေး အဓိကရုဏ်းဟာ စစ်တပ်နောက်ခံ အစိုးရ အတွက် အမြတ်တွေ အများကြီး ရလိုက်
at 6/08/2013 09:55:00 AM
ဒီ ဘာသာရေး အဓိကရုဏ်းဟာ စစ်တပ်နောက်ခံ အစိုးရ အတွက် အမြတ်တွေ အများကြီး ရလိုက်တယ်။
(၁) ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နဲ့ ၈၈ ကျောင်းသားတွေလို အထင်ကရ ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင်တွေ အတွက် ကမ္ဘာ့စံချိန် စံညွန်းအရ လူ့အခွင့်အရေး နဲ့ ပတ်သက်လာရင် မဖြစ်မနေ အပြောခံရမှာပဲ။ ကြံ့ဖွတ်အစိုးရ ကတော့ ၀ိနည်းလွတ်နေတယ်ပေါ့။
(၂) ဗုဒ္ဓဘာသာကို ဦးစားပေး ဘာသာ အနေနဲ့ ရှုမြင်လာခြင်းအတွက် ဘာသာမတူ တဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေကြား သဘောထားကွဲသွားနိုင်တယ်။ ဥပမာ- ဗုဒ္ဓအခြေခံ တိုင်းရင်းသား ဖြစ်တဲ့ ရခိုင်၊ မွန်၊ ရှမ်း တွေနဲ့ ခရစ်ယာန် အခြေခံ တိုင်းရင်းသားဖြစ်တဲ့ ချင်း၊ ကချင်၊ ကရင်၊ ကယား တွေကြား နားလည်မှု လွဲမှားသွားနိုင်တယ်။
(၃) စစ်တပ် အခန်းကဏ္ဍကို ချဲ့ထွင်လာတယ်။ ဥပမာ.. လားရှိုးကိစ္စမှာ စစ်တပ်ရှိလို့တော်သေးတယ်... ဆိုတဲ့အမြင်မျိုးရှိလာတယ်။ (တကယ်တော့ ရှမ်းလူမျိုးတွေ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရရင် ဒီလို ပြဿနာ (ဘာသာရေးဆန်ဆန် အဠိဂရုဏ်း ရှိလာမှာ မဟုတ်ပါ။)
(၄) အခုလုပ်နေတဲ့ နေပြည်တော်က World Economic Forum ကာလ အတွင်းမှာတော့ ငြိမ်ပေး နေတယ်။ အစိုးရ သိက္ခာအတွက် အရေးကြီးတယ်လေ။ ဒီတော့.. " ဖြစ်စေ၊ မဖြစ်စေ" ဆိုတာ ဘယ်သူက ကြိုးကိုင်နေသလဲ။ နောက်ဆက်ဖြစ်မလာဖို့ မျော်လင့် ပါတယ်။
BURMA: KACHIN CIVILIANS KILLED DESPITE AGREEMENT T...
THE UNITED STATE IS NOT A DEMOCRACY IT'S A REPUBLI...
AHKYAK AI HTA GRAU AHKYAK DIK AI TEN ( DAW I )
Myu tsaw myit ngu ai hta
Despite the agreement reached between the GoM and ...
Hannah Beech ဆိုတာ ဘယ်လောက် ထက်မြက်တဲ့ အမျိုးသမီးလ...
YA HKYAK HKYAK MYEN ASUYA SHAW TAW NGA AI MAWLA-NY...
Sadi Maja ra ai ten
Simsa lam grai nhkrum bawngban yang,shada kamsham ...
ShingDu UShoi KaDai Jum
လက်ရှိဖြစ်ပွားနေသည့် ပဋိပက္ခများမှာ အမျိုးသားရေး ၀ါ...
သူခိုးဓမြ အစိုးရ လုပ်ထားသမျှ တပိုင်းတစ ဖေါ်ကောင်လုပ...
98-year-old Kachin Man who helped America in World...
ဦးဝီရသူအား မြေထောင်မြှောက်ပေးသော သာသနာပြုဒါယိကာမကြ...
အိုဘယ့် မြန်မာပြည် ..
Chin & Kachin are Brotherhood By Historical.
Blacklisted journalist Bertil Lintner returns to B...
Kachin peace marchers departed for Laiza from Myit...
N SHOP AI UHKA HTE MYU TSAW
Universal Declaration of Human Rights ( UDHR ) Bu...
RFA WITH SALANG GABA LA NAN (KACHIN) KIO,U NAING H...
TIME Magazine -- Europe, Middle East and Africa Ed...
လက်ဝါးကားတိုင်နဲ့ ဘုးရားဆင်းတုတော် နေပြည်တော်မှာ ...
ကချင်စစ်ရှောင်နေထိုင်သူများ အစိုးရမှစီစဉ် ထားပေးသ...
ကိုယ်တွေ့ပင်လုံအဆက်( 85/86 )
Lawt pru mat wa saga,,
ကိုယ်တွေ့ပင်လုံအဆက်( 83 /84 )
KIO jawng-sara, jawngma niauniform galai sai lam...
KIA Masat (4) Dap Ba Dap Dung (36, 38) Ginra Ni Ht...
KACHIN DAILY NEWS WEBSITE MADU WA A HKRINGDAT
မလေးရှားနိုင်ငံ ၌ တောင်းဆိုဆန္ဒဖော်ထုတ်ခဲ့
Bertil Lintner ( Swedish journalist shiga laika jo...
မြန်မာဒုက္ခသည်တွေ ကို ရွှေ့ပြောင်းပေးရေး မြန်မြန် လု...
Dukaba GunmawaNumhtet ga (click on video link)
What's happening in Burma? - YouTube video link
ကိုယ်တွေ့ပင်လုံ အဆက်(82 )
(Majan bai gasat ai2ning hpring masat nhtoi, DFW...
KIO Statement 12-6-2013
KIO's 19 Points Proposal During the National Conve...
Praying for Kachin (click on video link)
Mung masa Gat hkai ra ai lam ( ning mu )
Ahkyak ai lam matsing la ga
ကိုယ်တွေ့ပင်လုံ အဆက်(81 )
NUNUaSak se Kaja,Hkam sha yu ga le i ( click on ...
KIA,ဒုစစ်ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ဂွန်မော်နှင့်7Day...
ဦးသိန်းစိန် အစိုးရ၏ ကချင် အပေါ် ငြိမ်းချမ်းရေး ကမ်...
majan bai hkat ai2ning ladu hkrum sai; masat din...
Majan bai byin ai2ning hpring masat dingsat card...
We Kachin people's are crying for who die& who giv...
Foreign Office Minister Hugo Swire has commented o...
ကိုယ်တွေ့ပင်လုံ အဆက် 78
Rev. Fr Thomas GUMRAI AWNG's Biography
60 Kachin community organisations and Burma campai...
UK IB Times မှတင်ဆက်သည့် ဖုံးကွယ်ထားသည့် လူမျိုးတု...
၁၉၈၂ နိုင်ငံသား ဥပဒေ ကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် က နိုင...
ဘာသာရေး အဓိကရုဏ်းဟာ စစ်တပ်နောက်ခံ အစိုးရ အတွက် အမြ...
Announcement in Commemorations on 2nd Anniversary ...
ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် တစ်ကမ္ဘာလုံးရှိ ကချင်လှုပ်ရှားမ...
Global Day of Action for Kachin
Kachin Global Day of Action Demonstration in Forei...
AJAN GAW LAWNG WA AI HTE, DUMSU KANU GAW DARU WA A...
Kachin conflict ‘perfect storm’ for human traffick...
ဇွန်လ (၅) ရက်နေ့တွင် မြန်မာနိုင်ငံသား (၃၀၀) ကျော်က...
New Kachin church in China
ကချင်စစ်ပွဲ၂နှစ်ပြည့် မီဒီယာသမားတွေရဲ့ အားထုတ်ကြို...
မြန်မာပြည်ထဲ ပြန်ပို့ခံရမှာ ဒုက္ခသည်တချို့စိုးရိမ်ဆ...
‘Crossing Salween’ - trailer CLICK ON VIDEO
ဝ (UWSA) ရဲ့စစ်ရေး နိုင်ငံရေးတင်းမာမှုနောက်ဆုံးအခြေ...
၀ ပြည်နယ်တောင်း ( Wa state )